L2 Chinja Vagadziri & Vatengesi - China L2 Chinja Fekitori
S4600-28X-SI 10G Intelligent Ethernet Yekuwana Chinja
S4600-28X / 52X-SI ndeye L2 10G uplink akangwara switch yakagadzirirwa mutakuri uye MAN network. Inotsigira yakazara QoS, inowedzera VLAN mabasa (Dynamic VLAN, Voice VLAN, QinQ, N: 1 VLAN Dudziro nezvimwewo), Ethernet Ring Kudzivirira Protocol (G.8032), yakarongedzwa bandwidth control, akangwara chengetedzo kudzora, OAM (Operations, Administration uye Maintenance ), manejimendi mashandiro uye Triple-Play masevhisi anozadzisa maratidziro anodikanwa anotakurwa neanotakura network, MAN kuwana. S4600-2 ...
S4600-SI Gigabits Dual Stack Akangwara switchch
DCN S4600-SI dzakateedzana dzakazara GbE yakamira yakachinjika switch inopa bhizinesi-kirasi kuwana yekambasi uye yebazi kunyorera. Aya ma switch akakwenenzverwa zvakakwana anogona kupa epamberi Layer 2 maficha pamwe nesarudzo yekusarudza pamusoro peEthernet Plus (PoE +) simba. inobatanidza epamberi manejimendi uye chengetedzo mabasa ekupa kuita uye scalability. Iyo yakanaka mhinduro kune bhizinesi uye anotakura kuwana network kuendesa. Zvinokosha Zvimiro uye Zvakasarudzika Green Energy S4600-SI nhepfenyuro inoenderana neIEEE ...
S4200-SI Series L2 Gigabits Dual Stack Yakangwara Shanduko
DCN S4200-SI akateedzana anodhura-anoshanda GbE yakamira maswitch inopa bhizinesi-kirasi kuwana yekambasi uye yebazi kunyorera. Aya ma switch akakwenenzverwa zvakakwana anogona kupa epamberi Layer 2 maficha pamwe nesarudzo yekusarudza pamusoro peEthernet Plus (PoE +) simba. Yakagadzirirwa kushanda kuri nyore kudzikisa mutengo wakazara wevaridzi, zvinogonesa scalable, chengetedzo, uye simba-rinoshanda bhizinesi mashandiro nehungwaru masevhisi. Zvidimbu Zvakakosha uye Zvakasarudzika Green Energy S4200-SI akateerana anoenderana ...